Hooyo… wali si dhab ah ugama helin lacagtaada bilaashka ah ee Amazon? - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Umad ... si dhab ah miyaadan wali u helin lacagtii Amazon ee bilaashka ahayd? - BGR
Horaanba dhowr jeer ayaan uga wada hadalnay dallacsiintaan welina waan ka hadlaynaa. Waa maxay sababta? Sababtoo ah WAA LACAG LA'AAN! Xaqiiqdii, Amazon waxay bixisaa xayeysiin waqti xaddidan oo gaar ah oo kugu soo galay 15 USD bilaash ah waxaanan ku tusin doonnaa sida loo soo qaado.
Si fudud u iibsato kaararka hadiyadda ee Amazon ee lagu qiimeeyay 50 USD isla markaana u isticmaal xayeysiinta 19GIFTCARD dalabka. Markaad sidaa yeeshid Amazon waxay ku siin doontaa amaah bilaash ah 15 $ ! Ka dib kaliya ku dar dheelitirka kaararka hadiyadda ee 50 $ xisaabtaada, maxaa yeelay waxaad weli ku bixin doontaa lacagtaas Amazon, oo waxaad kaliya bixisay 50 $ si aad u hesho 65 $. Waa wax fiican! The caveat waa in dalacsiinta kaliya loo heli karo dadka aan waligood iibsan kaararka hadiyadda Amazon ka hor bogga internetka. Haddii aad ka iibsatay kaararka hadiyadda ee Amazon dukaan waqti walba, taasi waa fiicantahay welina waad ku raaxeysan kartaa dallacsiinta.
Haddii aad dhib ku qabtid adeegsiga koodhkan sicir-dhimista, ha walwelin maxaa yeelay dad kale ayaa horeba dhibaatooyin u lahaa. sidoo kale. Kaliya soco this page oo guji batoonka si loogu daro dalacsiinta koontadaada. Waxaad heli doontaa 15 $ oo bilaash ah!
Halkan waxaa ku qoran macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bogga Amazon:
Kaararka hadiyadda ee Amazon.com weligood ma dhacayaan mana soo saaraan wax ajuuro ah.
Dhawr nooc oo hadiyad ah iyo noocyo ay ka kala dooran karaan
waxaa laga iibsan karaa malaayiin shey oo dhan dukaanka oo ku yaal Amazon.com ama bogagga internetka ee xiriirka la leh.
gaarsiinta degdegga ah ama jadwalka illaa hal sano ka hor.
Looma soo celin ama dib loo soo celiyo kaararka hadiyadeed.
Kaararka Hadiyadda ee Amazon.com waxaa loo isticmaali karaa oo keliya in lagu iibsado alaabada iyo adeegyada u qalma Amazon.com iyo goobo cayiman oo la xiriira. waxaa lagu siiyaa shuruudaha iyo shuruudaha Kaarka Hadiyadda ee Amazon.com. Si aad u iibsato kaarka hadiyadda si loogu isticmaalo websaydhka Amazon ee dal kale, booqo Amazon.com, Amazon.cn, Amazon.com, Amazon.de, Amazon.in, Amazon.it, Amazon .co.jp, Amazon. co.uk, Amazon.es ama Amazon.com.au.
Isha Muuqaalka: OMER MESSINGER / EPA-EFE / Shutterstock
wixii aad ku samaysay